Daruuraha Mammatus: astaamaha, asalka iyo sameynta | Saadaasha Shabakadda
Sidaan ognahay, saadaasha hawada noocyada kala duwan ee daruuraha ayaa loo isticmaalaa in lagu ogaado saadaasha hawada qaarkood xilligan. Nooc kasta oo daruur ahi waxay leedahay tilmaam u gaar ah iyo isha ay ka sameysmaan. Mid ka mid ah daruuraha qaabka ugu yaabka leh ayaa ah daruuraha mammatus. Iyagu waa nooc qariib ah oo ah qaababka daruuraha oo aan cidna uga tagaynin danayn la'aan. Amateurs iyo khuburada saadaasha hawada labaduba si isku mid ah ayey fiiro gaar ah uqaataan isla markaana sawirro ugaqaataan qaababka cajiibka ah ee daruuraha mammatus leeyihiin.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kaaga warranno asalka, astaamaha iyo saadaasha daruuraha mammatus.
2 Sidee daruuraha mammatus u samaysan yihiin
3 Xaaladaha deegaanka ee daruuraha mammatus
4 Faahfaahin iyo astaamo
Xaaladdan oo kale maaha nooca daruurta, laakiin astaamaha suurtagalka ah ee ugu muhiimsan. Waxaa jira dad badan oo layaaban qaababka yaabka leh ee quruxda badan ee daruurahaas. Labada hiwaayad iyo xirfadleyda saadaasha hawada ayaa ahmiyad weyn siiya daruuraha noocan oo kale ah ee u ekaada mammoth-ka oo mararka qaarkood cirka ka muuqda. Mid ka mid ah tusaalooyinka ugu caansan ee daruuraha mammatus waa kan sawirka saadaasha hawada ee lagu qabtay Nebraska ee NASA ka dib markii ay soo martay duufaantii 2004. Sawirkani wuxuu noqonayaa mid ka mid ah kuwa ugu matalaya tilmaanta daruuraha noocan ah.
Kala soocida hadda jirta ee lagu ururiyey daruuraha atlas ee leh 10 hidde, 14 nooc iyo 9 nooc oo lagu daray muujinta astaamo dheeri ah oo kala duwan ayaa ah daruuraha mammatus. Waana taas inaysan ahayn nooc daruur ah laakiin waa qaab lagu soo bandhigo salka noocyo badan oo hal nooc ah. Dhammaan noocyada ku lug leh waa kuwan soo socda: cumulonimbus, altocumulus, altoestratus, cirrus, cirrocumulus, iyo stratocumulus. Dhammaantood waxay qaadan karaan qaabkan gaarka ah oo ka kooban soohdin soo laalaada sida jawaano waaweyn ama yaryar oo samada ka laalaada. Kuwo badan ayaa ku xira naasaha xayawaanka naasaha, sidaas awgeed magaceeda.
Sidee daruuraha mammatus u samaysan yihiin
Aynu aragno nooca ay sameysmayaan noocyadan ay ku xiran tahay xaaladaha deegaanka ee jawiga. Marar badan, waxay ka muuqdaan aagagga hadhay ee duufaannada baaluqsan, taas oo macnaheedu yahay inay ka guurayaan goobjoogaha qaybtiisa ugu firfircoon. Inta badan meelaha u dhigma naasaha waxaa lagu arki karaa daruuraha horumarka. Caadi ahaan daruurahaani waxay gaaraan horumar ballaaran oo toosan oo leh qaab dhismeedka qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka.
Waxay ku taal meelaha ugu fog qaybta firfircoon ee daruurta, taas oo ah mida leh xoog kor u socda, in qulqulka hawadu hoos u muuqdaan. Waa mid ka mid ah sababaha ay u dhaliso sameynta naasahan layaabka leh iyo astaamaha qaababkan daruuriga ah.
Dhamaan cirka oo dhan waxaan leenahay daruuro qariib ah oo leh qaabab xasaasi ah oo xitaa cabsi gelin kara xaalado badan. Daruuraha Mammatus waxay leeyihiin kuus kuus aan dhammaad lahayn oo u samaysmaya sabab isku dhaca hoos u dhaca xoog leh ee hawada. Maaha daruuro iyaga laftoodu samaysan kara oo noqon kara nooc noocyo kala duwan ka duwan, laakiin halkii laga samayn lahaa daruuraha aan kor ku soo xusnay. Mar kasta oo ay jirto hoos u dhigis ku burburinaysa ka soo horjeedkeeda abuuritaankeeda, dusha sare wuxuu ku dambayn doonaa fasal buurbuur ama naaso oo u bixiya daruurtan xiisaha leh magaceeda.
Mid ka mid ah qaab dhismeedka ugu wanaagsan uguna cajaa'ibka badan wuxuu dhacaa marka hoos u dhigid lagu sameeyo daruuraha dhexe ee cumulonimbus. Daruurahaan waxaa badanaa loo qaabeeyaa sida kuleylka waana kuwa soo saara mammatus-ka ugu caansan. Waana inay ka soo bilowdo salka daruurtu inay ka soo laalaadaan burooyin qurxoon oo istaahila in la arko.
Xaaladaha deegaanka ee daruuraha mammatus
Waxaan arki doonnaa waxa ay yihiin xaaladaha deegaanka ee lagama maarmaanka u ah sameynta daruuraha mammatus. Ka soo jeeda asalka ugu caansan ee nooca gudbinta. Daruuraha oo dhami waxay samaysmaan marka hawo diiran oo ka cufan hawada qabow ay u soo jeedo. Hawadaani waxay u kacdaa sidii oo ay ahayd xumbo hawo ah oo ka timaadda biyaha. Sababtaas awgeed, hawada kulul ee lagu rakibo uumiga biyaha waxay ku dhammaataa isu-ururin markay ku dhacdo lakabyo kale oo hawo qabow oo heerkulku hoos uga dhaco joogga. Tani waa sida ay u maamusho sameynta dhibco yaryar oo markaa u keena tamarta kuleylka deegaanka ku hareeraysan sababtoo ah kuleylka uumiga ee keenaya in cufnaanta ay u sii muuqato xitaa maadaama geeddi-socodka koritaanka dhererku sii socdo.
Kuleylka la sii daayo inta lagu guda jiro uumiga wuxuu la mid yahay kan qorraxdu u baahneyd inay dalbato si ay uga ugasho isla dhibicda biyaha. Tan waxaa loo yaqaan kuleylka uumiga ee qarsoon. Xaaladda qalafsan ee jirka waa mid aad muhiim u ah waxayna keentaa in diyaaradaha hawada sii koraya ay gaaraan xawaare ka badan 100 kiilomitir saacaddii., gaarsiinta inuu u kaco dhulka dhererkiisu ka badan yahay 15 kiiloomitir. Haddii ay jirto dabayl jiifta oo xoog leh oo jooggeedu yahay 5 ama 10 kiiloomitir, daruur ayaa soo bixi doonta illaa ay ku dhacdo diyaarad hawo qabow ah oo ku dhacda hareeraha daruuriga, taas oo keenta qaabka anvil ee caadiga ah ee daruuraha cumulonimbus.
Mammatus waa dhif iyo naadir. Waxay mararka qaarkood dhacaan kadib markay ifafaalooyin jawiga adag ay samaystaan, sida xagga hoose ee daruuraha cumulonimbus. In kasta oo ay cabsi badan yihiin, haddana dhib ma leh.
Faahfaahin iyo astaamo
Qaybta daruuraha rasmiga ah ee noqon kara mid aad u ballaaran marka loo eego deegaanka ay hawadu ka kacdo. Meelaha ka fog cusbooneysiinta xoogga leh, hawadu waxay ka buuxsantay huur waxayna bilaabaysaa inay si wadajir ah ula degto kristantarrada yaryar ee ay wataan hawadu. Halkaan waxaan kaheleynaa sameynta naasaha. Boodh kastaa wuxuu muujinayaa mid ka mid ah daadadka hawada ee salka daruurta.
Marka laga hadlayo astaanta, joogitaanka daruurahaasi ma muujinayaan roob ama isbeddello kale oo ba'an oo xagga cimilada ah. Ifafaalaha ayaa ah mid soo jiidasho leh oo cajiib ah gaar ahaan qorrax dhaca marka qorraxda casaa ay iftiimiso oo ka soo horjeeddo dhammaan gooladaha kuuskuusyada.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto daruuraha mammatus iyo astaamahooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Daruuro » Daruuraha Mammatus